Igumbi Labantu Ababini, Igumbi Lokuhlambela Labucala Neshawa - I-Airbnb
Igumbi Labantu Ababini, Igumbi Lokuhlambela Labucala Neshawa
Myvatn, Skútustaðahreppur, Iceland
Igumbi elise- indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguBirkilauf
UBirkilauf unezimvo eziyi-23 zezinye iindawo.
Indawo yokuhlala entsha kwindalo embindini weLake Mývatn 's Laxárhraun lava-field. IBirkilauf ime kufutshane nezinye zezinto zendalo ezimangalisayo zaseMývatn, kodwa ikufuphi kuzo zonke iindawo eziphambili kunye neenkonzo kwingingqi eyingqongileyo.
IBirkilauf yeyentsapho kwaye yakhiwa ngezinto zasekuhlaleni, kwaye inikezela ngendawo yokuhlala kule ndawo ithuleyo nenoxolo, apho ilungu lentsapho lihlala likhona ukuze lifumane iindwendwe, libonelele ngeenkonzo, lize licebise ngezinto ezenziwayo kwingingqi eyingqongileyo.
IBirkilauf, ekwindawo esecaleni kweLake Mývatn, iBirkilauf yindlu yeendwendwe ekwindawo entle enamagumbi amabini, nganye inendawo yayo yokuhlambela neshawa, kunye nendawo yokuphuma yabucala eya kwintente.
Ikhitshi elikhulu elinento yonke, igumbi lokuhlala, kunye netyeya zisetyenziswa nangabanye abantu. Ichibi elimangalisayo kunye neentaba zinokubonwa ukusuka kwintente, apho kunokutya khona.
IBirkilauf ikude ngeemitha ezingamakhulu ambalwa ukusuka kwindledlana ephakamileyo 1, kufutshane neGrjótagjá, kwaye kulula ukuyifumana ngeGMaps path-planner. Izikhululo zeenqwelo-moya ezimbini zasekhaya zikude ngeekhilomitha eziyi-44 neekhilomitha eziyi-91. Imoto eqeshwayo icetyiswa ukuba ikwazi ukufikelela kuzo zonke izinto zendalo ezikufutshane. Inkcazelo ecacileyo yendlela iza kuthunyelwa ngeSMS okanye ngeimeyile xa ubhukisha.
IBirkilauf yeyentsapho kwaye yakhiwa ngezinto zasekuhlaleni, kwaye inikezela ngendawo yokuhlala kule ndawo ithuleyo nenoxolo, apho ilungu lentsapho lihlala likh…
I-Mývatn (igama laseIceland: [ŘmiŘvaŘtn ᐧ]) lichibi elinzulu eutrophic elihleli kwindawo yentaba-mlilo esebenzayo kumantla weIceland, kungekhona kude nentaba-mlilo i-Krafla. Ichibi kunye neendawo ezimanzi ezijikelezileyo zinezilwanyana ezinamanzi amaninzi, ingakumbi iidada. Ichibi lakhiwa kukuqhambuka kwelava enkulu kwiminyaka eyi-2300 eyadlulayo, kwaye indawo ejikelezileyo ilawulwa ziintaba-mlilo, kuquka iintsika ze-lava kunye neengcambu (ii-pseudaters). Umlambo osebenza kakuhle iLaxá waziwa ngokuloba okumuncis 'iintupha kunye nesalmon yeAtlantiki.
Umbuki zindwendwe ngu- Birkilauf
Siyintsapho esisebenzisana nayo enikezela ngendawo yokuhlala kule ndawo ithuleyo nenoxolo ecaleni kwazo zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi baseMývatn. Ilungu lentsapho lihlala likhona ukuze lifumane iindwendwe, linikezele ngeenkonzo, kwaye licebise ngezinto ezenziwayo kwingingqi eyingqongileyo.
Ungasifumana ukususela ngo-08:00 ukuya kutsho ngo-22: 00 ngomyalezo we-AirBnB, ngefowuni, okanye ngokucofa nje - njengoko sihlala kwindawo elandelayo. Siyayazi indawo ngaphakathi nangaphandle - kwaye sinokuphendula yonke imibuzo yakho.
Siyintsapho esisebenzisana nayo enikezela ngendawo yokuhlala kule ndawo ithuleyo nenoxolo ecaleni kwazo zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi baseMývatn. Ilungu lentsapho lihla…
Inombolo yomthetho: HG-00004138